‘टिम बद्रि’ को सहयोगी हात, दुबईबाट जुम्ल्याहा बच्चासहित उद्वार गरिएकी युवतीलाई ३ लाख सहयोग – PrawasKhabar
२०७८ मंसिर २१ गते ०:५५
उनलाई सुरुमा लागेको थियो– दुबई पुगेपछि सबै समस्याबाट मुक्ति पाउँछु! तर, विदेशमा पनि उनलाई दुःखले पिछा छोडेन। अझ भनौं उनले कल्पनै नगरेको चोट सहनुपर्यो।
उनी जुन केटालाई विश्वास गर्थिन, उसले धोका दियो। उनको काम ‘सेल्स डिपार्टमेन्ट’ मा थियो। तुलनात्मक रूपले अरुभन्दा राम्रो। तर, एकदिन काम गर्ने सिलसिलामा नराम्ररी बिरामी परिन्। उनलाई सबैको सहयोगले अस्पताल पुर्याइयो। यही थाहा भयो– उनी आमा बन्न लागेकी रहेछिन्। यो घटनाले गर्दा उनले खादै आएको जागिर गुमाउनु पर्यो। कोरानाका कारण विश्व अस्तब्यस्त भएको बेला २८ अगस्ट, २०२० मा उनले दुबईकै एक अस्पतालमा दुई जुम्ल्याह छोरी तेन्जिङ डोल्मा र साङ्गे डोल्मालाई जन्म दिइन्।
यसबीच उनले आफूलाई धोका दिने केटा तथा आफ्नो छोरीका बुवालाई खोज्ने चेस्टा नगरेकी होइनन्। तर, कतै पत्तो नलागेपछि उनी गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) युएईको प्रतिनिधिहरूको सम्पर्कमा आइन्।
र, एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा.बद्रि केसीको संयोजकत्वमा रहेको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रमले उनको र उनको छोरीको उद्धार गर्यो।
त्यसयता उनी काठमाडौंको जोरपाटीस्थित एउटा घरमा एक कोठा भाडामा लिएर आफ्नो छोरीहरू पाल्दै आइरहेकी थिइन। उनलाई साथ र सहयोग गर्ने नहुँदा छोरीहरू हुर्काउन निकै गाह्रो परिरहेको थियो।
तर, डा. बद्रि केसीकै समूहले सोमबार तीन लाख रुपैयाँ उठाएर फेरि उनको उद्धार गरेको छ। अमेरिकाबाट हालै नेपाल फर्किएकी यमुना भट्टराईले तीन लाख रुपैयाँको चेक उनलाई जोरपाटीस्थित उनकै डेरामा पुगेर बुझाउँदा उनी भक्कानिन् पुगेकी थिइन।
वास्तवमा यो घटनालाई डा. केसीले निकै नजिकबाट नियालिरहेका छन्। समाजमा देखिने यस्ता विकृत घटनाले उनी उद्धेलित पनि हुने गरेका छन्। ‘म अरुको दुःख हेर्न सक्दिन। यो घटनामा हामी संलग्न भएदेखि नै म साथीहरूलाई सोधिरहेको हुन्छु,’उनले भने, ‘राम्रो नभएको जानकारी पाएपछि फेरि सबै मिलेर सहयो गी हात अगाडि बढाएका हौडा. केसी संयोजक रहेको राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापना समितिले पासाङलाई मात्र होइन, उनी जस्ता विदेशमा दुःख पाएका २ हजार नेपालीको उद्धार गरिसकेको छ। एनआरएनएको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि यो आफैमा ठूलो? उपलब्धी हो।
पासाङको सहयोगमा जुटेका एनआरएनएका सचिव अमेरिका निवासी गौरीराज जोशी पनि विपतमा परेका नेपाली चेलीहरूलाई सहयोग गर्न पाउनु आफ्नो पनि भाग्य भएको बताउँछन्। ‘यस्ता घटनाले कसको मन दुख्दैन र! मेरो पनि दुखेको छ। तत्कालका लागि हामीले केही आर्थिक सहयोग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य खाली आर्थिक सहयोगमा मात्र केन्द्रित छैन। उनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ पनि केन्द्रित छ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीमा दुःख पाएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्।